Mahafinaritra ve ny satrok'i KFC amin'ny fanaovana marika any Russia? | Famoronana an-tserasera
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanana hevitra tsara avy tamin'ny marika akanjo izahay mba hamadihana tanteraka ny zava-misy amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing mihoatra ny fahombiazana. dia KFC ilay nitranga mba hamadika ny raharaha Mikasika ny soan'akoho nendasina.
Saingy mety hianjera ilay hevitra, satria navadika hamorona azy io amin'ny andiana satroka izay ny marina Tsy hoe tsara tarehy be ry zareo ... Na farafaharatsiny izany no fahitantsika antsika voalohany.
Ka ny hevitra dia ny manova an'io kioba io ny tena lokon'ny koba akoho nendasina avy amin'ny orinasa amerikana amin'ny satroka "cool" sasany. Ny vita dia ny mamadika azy io ary mamadika azy ireo ho satroka mety hiteraka fanesoana samihafa.
Miresaka momba ny a tetikasa natao ho an'ny KFC Russia ary miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny W + K Amsterdam sy ny marika akanjo an-tanan-dehibe Mam Cupy. Ny asehony dia ireo logo KFC sy Mam Cupy nivadika ho ambany koa; Hoy aho, lamaody izany y Ny marika akanjo Desigual dia mampiseho azy amin'ny fomba tsara.
Fanentanana ny marika ho an'ny KFC Russia Ary saika mifanitsy amin'ny sasany amin'ireo fampielezana marketing hafahafa hitanay avy amin'ny KFC, toy ny fony izy tsy maintsy nifona tamin'ny alàlan'ny dokambarotra iray nataon'ny MOther London.
Andao hojerentsika, inona no mitranga Io satroka siny io dia toa nisy nanipy izany taminy amin'ny iray hafa. Ny tsy hita dia ny sisa tavela amin'ny sakafo, fa angamba ny mandeha lavitra loatra amin'ity marketing ity izay sarotra be indraindray ary manandrana tsy ampoizina foana. Tsy dia misy fiafarana tsara foana toa ity indray mitoraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Indraindray zavatra tsara ve ny mamadika ny zavatra toy ny fampielezan-kevitra KFC?